Cuntada - Xiamen Gelken Gelatin Co., Ltd.
Gelatin waa nooc ka mid ah cirridka dabiiciga ah ee saafiga ah ee laga soo saaro maqaarka lafaha xoolaha, qaybtiisa ugu weyna waa borotiin. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa dubista guriga. Shaqadeedu waa in la adkeeyo maaddooyinka. Cuntada leh gelatin waxay dhadhamisaa jilicsanaan iyo laastik, gaar ahaan soo saarista mousse ama caano. Dhexdooda, gelatin waxaa loo qaybin karaa xaashi gelatin ah iyo budada gelatin. Farqiga u dhexeeya iyaga ayaa ku jira qaababka jireed ee kala duwan.
Ka dib markii la qooyay, xaashida gelatin waa in la miiro oo la galiyaa xalka si loo adkeeyo, ka dibna waa la kicin karaa oo la dhalaali karaa. Si kastaba ha noqotee, budada gelatinous uma baahna in la kiciyo inta lagu guda jiro qoynta. Ka dib markay si otomaatig ah u nuugto biyaha oo ay u ballaadho, si siman ayaa loo walaaqa ilaa uu dhalaalayo. Kadib ku dar xalka diiran si loo adkeeyo. Ogsoonow in dhammaan macmacaannada ka samaysan gelatin ay u baahan yihiin in la qaboojiyo, taas oo fududahay in lagu dhalaaliyo oo lagu beddelo jawiga diirran.
1. Markaad sameysid miro mousse ah, maxaa yeelay enzyme-ka ku jira miraha ayaa baabi'in doona borotiinka ku jira gilding, taas oo ka dhigeysa gelatin awoodin inuu adkeeyo, midhaha noocan ah waxaa ka mid ah miraha kiwi, babayga, iwm. waa in marka hore la karkariyaa miraha.
2. Haddii gelatin qoyntu aan isla markiiba la isticmaalin, waa in marka hore lagu kaydiyaa qaboojiyaha ka dibna la soo bixiyaa marka loo baahdo.
Qiyaasta guud ee gelatin ee nacnaca waa 5% - 10%. Saamaynta ugu fiican ayaa la helay markii qiyaasta gelatin ay ahayd 6%. Ku darida gelatin ee ciridka waa 617%. 0.16% - 3% ama in ka badan oo ku jira nougat. Qiyaasta sharoobada waa 115% ～ 9%. Maadada lozenge ama nacnaca jujube waa inay ku jirtaa 2% - 7% gelatin. Gelatin wuu ka jilicsan yahay, ka dabacsan yahay kana hufan yahay istaarijka iyo agar soosaarka nacnaca. Gaar ahaan, waxay ubaahantahay gelatin leh awood jel sare markay soosaarayso nacnac jilicsan iyo jilicsan iyo rooti.
Wixii Cunto Caano ah
Abuuritaanka xarigga hydrogen ee gelatin la cuni karo wuxuu si guul leh uga hortagaa roobabka whey iyo foosha casein, taas oo ka hortageysa wajiga adag inuu ka sooco wajiga dareeraha wuxuuna hagaajiyaa qaabdhismeedka iyo xasilloonida alaabta la dhammeeyay. Haddii gelatin la cuni karo lagu daro yogurt, kala soocida whey waa laga hortagi karaa, qaab dhismeedka iyo xasiloonida sheyga waa la horumarin karaa.